Soo-saareyaasha dhagaxa & dhagaxa dhalaalaya - Shiinaha Shibbis-dhagaxyada & Dhagaxleyda dhalaalaya iyo Warshadaha
Luminescent Gravel Dhagxan yar oo aan caadi ahayn
quruurux dhalaalaysa oo iftiin leh, Si balaadhan loogu adeegsaday marble artificial, Selidstone artificial, terrazzo, disk / aquarium disk, bonsai, barkadda dabaasha, qurxinta, iwm.
Ku dhalaalaya mugdiyo dhalaalaya oo madoobaaday
Ku dhalaalaya mugdi dhalaalaya dhalaalaya Photoluminescent cobblestone (qaab dhalaalaya, qaab guluub leh) Qaab dhismeedka cas leh ee iftiinka leh ee iftiinka dheer kadib iftiinka madow & is-iftiiminta mugdiga cirka-buluug iwm. Maalintii cajiibka ahayd midab cad, jaale, cagaar, buluug, casaan iwm Waqti dheeri ah kadib: wax ka badan 8 saac Hadiyado dhiirrigelin Koobid: Kaar madax oo kala duwan ama boorsada FOY ama loo habeeyay Wax aan sun ahayn, aan dhib lahayn , Radio-radioac ...
Shaxanka Photoluminescent (dhalaalaya, qaabka quruxda leh) 1. Aquarium iyo patchway 2. Iftiimin mugdi ah 3. Saddex dhalaalaya midabka mugdiga ah oo la arki karo 4. EN71 Ansixinta shahaadada 5. Cabbirka iyadoo loo eegayo shuruudahaaga Magac buuxa: Chips Sifooyinka: Si balaadhan oo loo isticmaalo marble artificial, Selidstone artificial, terrazzo, disk / aquarium disk, bonsai, barkadda dabaasha, qurxinta, iwm. Ku soo iftiinka mugdiga & ...
Dhalaalaya dhalaalaya mugdi ku jira mugdiga madow
Koofiyadaha Wareega ah ee loo yaqaan 'Photoluminescent Round' (oo dhalaalaysa 3mm & 5mm koollo) Dhamaan jirka oo iftiin leh Saddex midab leh oo iftiin leh ayaa la heli karaa Qaab dhismeedka wareega wareega oo fiican, iska caabin aan fiicneyn, Qurxinta muuqaalka dhul ku habboon iibinta dhibco: Qaabka wareega ee cajaa'ibka badan, guluusyada dhalaalaya oo buuxa dhalaalaya Magaca oo buuxa Magac dhalaalaya dhalaalaya iftiinka wareega wareega madow Codsiga Ganden qurxinta, waddo de ...
Ku dhalaalaya mugdiyo guduud mugdi ah
Ku dhalaalaya mugdiga & is-iftiiminta mugdigaVarious Midabada dhalaalaya: midabka jaalle-cagaaran, buluug-cagaaran iyo buluug-buluug iwm.
Caaga-dhagaxa ah ee loo yaqaan 'pan lumenscent pebbles' Iftiiminnada dhagaxa ah ee naxaasta leh ayaa ah dhagax dhalaalaya oo dadku sameeyay, oo ku saleysan midabka Photoluminescent iyo resin synthetic gaar ah. Marka loo soo bandhigo ilaha iftiinka, midabka loo yaqaan 'photoluminescent colors' ee iftiinka cobblestone wuxuu noqdaa mid faraxsan oo dhalaalaya mugdi isagoo markii hore aad u xoog badan, ka dibna si tartiib tartiib ah habeenimadii ugu yaraanaya. Iftiiminta waxaa ugu wanaagsan oo lagu arkaa aag mugdi ah, oo ay ka jiraan ilaha iftiinka amba sida iftiinka jidadka iyo iftiinka dayaxa. Tilmaamo Ku soo ifbaxa mugdiga & is-...
luminescent polil guluubka dhalaalaya
Dambiilaha iftiinka leh ee iftiinka leh, ee sidoo kale loo yaqaan terrazzo-nalka leh, waxay si aan caadi aheyn ugu dhow yihiin terrazzo dhabta ah. Ma laha cidhifyo iyo geesood, oo cabbirkoodana waa la sii hagaajin karaa. Iyaga ayaa si ballaaran loo adeegsadaa. Waxaa lagu dhajin karaa weel wadooyinka caadiga ah, oo waxaa lagu ridi karaa saxanka musqusha adigoon waxyeelloobin kalluunka yar. Wax aan sun ah iyo waxyeelo lahayn shucaac. Shahaadada ha ka aqoonsato hay'addu. Qalabka dhagaxa leh ee loo yaqaan 'Photoluminescent cobblestone' (qaab dhalaalaya, qaab aan kala go 'lahayn) Astaamaha: Ku soo iftiimaya mugdiga ...
Dhalaxa dhalaalaya ee dhalaalaya
Ku dhalaalaya mugdiga & is-iftiiminta ee mugdigaVarious Midabada dhalaalaya: midab huruud ah, cagaar iyo buluug iyo buluug iwm.